COVID-19 BOENY : Mbola misy marary iray tsaboina ao amin’ny hopitaly manarapenitra
Efa ambany dia ambany ny tahan’ny olona mitondra ny tsimokaretina covid-19, ka azo ambara fa voafehy ny valanaretina eto amintsika hatreto. 28 octobre 2020
Tato anatin’ny iray volana dia olona iray ihany no hita fa narary sy naiditra hopitaly teto Mahajanga. Olona lehibe iray efa 73 taona no mbola manaraka fitsaboana ao amin’ny hopitaly manara-penitra ao, fa nisy fahasarotany, hoy ny dokotera Rakotonavalona Rivomalala talem-paritry ny fahasalamana. Efa mihatsara kosa izy ary antenaina ny hivoahany hopitaly ato ho ato.
Tapitra ny hamehana ara-pahasalamana saingy mbola mandehandeha ny tsimokaretina. Ary mbola misy ny voatily. Mbola miveziezy ny tsimokaretina manerana an’i Madagasikara satria nisy olona avy amin’ny faritra hafa tonga teo voatily fa mitondra ny tsimokaretina.
Tokony hohajaina hatrany ny fihetsika sakana, sy ny elanelana. Tokony tsy hiraviravy tanana amin’ny fiarovana tokony hatao ny rehetra, ny fanaovana aron-tava sy ny fanasana tanana amin’ny savony sy rano. Indrindra raha mikirakira vola satria ankoatra ny covid-19 dia misy koa ny aretina azo avy amin’ny tanana maloto tahaka ny tifoidra izay mateti-pitranga eto Mahajanga. Ahafahana misoroka aretina marobe ny fanasana tanana amin’ny rano sy savony.
Raha ny teto Mahajanga manolana dia nahatratra 337 ireo olona nitondra ny tsimokaretina covid-19 amin’ny olona miisa 1040 notiliana teto. Miisa 12 ny namoy ny ainy ary 324 kosa no sitrana. Ireo notilina ihany ireo fa isika rehetra dia samy mahafantatra olona nisehoan’ny trangan’aretina toy ny tazo, tsy maheno fofona sy tsironkanina sy ny maro hafa … saingy tsy nanao fitiliana ary sitran’ny evoka sy fihinanana tongolo gasy sy tambavy Malagasy isan-karazany. Fahendrena hatrany ny misoroka toy izay mitsabo.
Tovolahy 18 taona nanolana an-jandriny vavy 06 taona voasambotra ANATIHAZO-ISOTRY (365) 25 janvier 2021 Ho azo tanterahina eto Madagasikara ny fandidiana famindrana voa FIANGONANA SY NY FANJAKANA (97) 25 janvier 2021 Niakatra 442 ny marary vaovao, 06 ny namoy ny ainy FIVOARAN’NY COVID-19 (89) 25 janvier 2021 Mikatsaka ny fampidinana ny vidin-jiro sy rano eto Madagasikara FILOHA ANDRY RAJOELINA (72) 25 janvier 2021 Mpanendaka miisa 06 sy mpifoka rongony roa saron’ny Polisy ASAN-JIOLAHY ETO AN-DRENIVOHITRA (58) 25 janvier 2021 Tonga ireo fitaovana vaventy fanaovan-dalana FANOMEZANA FAHALEOVAN-TENA NY FARITRA (54) 25 janvier 2021